Raw Nandrolone (Durabolin) Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Daawada Raw Nandrolone (Durabolin) waa steroid antholic synthetic oo leh sifooyin u gaar ah waxaana suurtogal ah in ay ka faa'iidaystaan ​​daaweynta caafimaadka labka ah ee kali ah, ama sidii loogu talagalay TST loogu talagalay ragga labadaba. Nandrolone wuxuu leeyahay nolol dhimis muddada dheer ah ee plazma iyo xoojin xoog leh oo loogu talagalay qaboojiyeyaasha qudaarta.
Raw Nandrolone (Durabolin) budada (434-22-0) video
Raw Nandrolone (Durabolin) budada (434-22-0)
Nandrolone waa steroid antholic synthetic ah oo leh sifooyin u gaar ah waxaana suurtogal ah in faa'iido laga helo daaweynta caafimaadka labka ah ee kali ah, ama sidii loogu talagalay TST loogu talagalay ragga labadaba. Nandrolone wuxuu leeyahay nolol dhimis muddada dheer ah ee plazma iyo xajin xoog leh oo loogu talagalay qaboojiyeyaasha xayawaanka. Qalabka Nandrolone waxaa loo isticmaalaa daaweynta anemias, cachexia (laf-dhabarka cilladda), osteoporosis, kansarka naaska, iyo calaamado kale. Ma aha kuwo firfircoon oo afka ah waana in la siiyaa cirbadeynta murqaha.
Nandrolone esters ayaa markii ugu horreysay lagu sharraxay oo loo soo bandhigay isticmaalka daaweynta ee 1950. Waxay ka mid yihiin AAS adduunka oo dhan loo isticmaalo. Intaas waxaa dheer, isticmaalkooda caafimaad, nandrolone esters ayaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo jirka iyo waxqabadka, waxaana la sheegay inay yihiin kuwa ugu ballaaran waxaa loo isticmaalay AAS ujeedooyinkaas.
Root Nandrolone (Durabolin) budada (434-22-0) Smamnuucista
Product Name Rood Nandrolone (Durabolin) budada
Magaca Kiimikada NADROLONE;NANDROLON;NANDROLONE;NORANDROSTENOLONE;NORTESTOSTERONE, 19-;(17beta)-estr-4-en-3-on ;17-beta-hydroestr-4-en-3-one ;17beta-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one
Fasalka Daroogada Androgen; Steroid anabolic; Progestogen
Molecular Wsideed 101.19
barafku Psaliid 120-125 ° C
Karkarinta: 357.38 ° C (qiyaasta adag)
SOlubility Biyaha Solubility, 0.0561 mg / mL
Application Nandrolone waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo caafimaadka labka ah ee kaligiis, ama sidii loogu talagalay TST loogu talagalay raga uurka leh.
dib u eegis 1 waayo, Root Nandrolone (Durabolin) budada (434-22-0)
Sheyga NANDROLONE (DURABOLIN) waa mid aad u faa'iido leh.